९ कार्तिक २०७७ | October 25, 2020
जनताले नै लखट्ने भए मोर्चाका कार्यकर्तालाई
Monday, 16 May, 2016 11:30 AM
३ जेठ, काठमाडौँ ।
जडिबुटी कोटेश्वरमा बस्ने शारदा पौड्याल माइतीघरमा निकै अतालिदै कुदिरहेकी थिइन् । घरमा १ वर्षको छोरा छाडेर लोकसेवा तयारी कक्षाकालागि बागबजार पुगेकी उनलाई जडिबुटी छिट्टै पुग्नु थियो । तर संघीय गठबन्धनले ९ बज्न नपाउँदै सडक जाम गराएपछि उनि हिडैर जडिबुटी आउन बाध्य भइन् ।
यता माइतीघरमै कक्षा ११ को परिक्षा दिएर फर्किरहका युवाहरुको अर्को एक जत्था पनि हिडिरहेको थियो । ती युवाहरु पनि आन्दोलनबाट वाक्क थिए । अफिस टाईममा सुरु गरिएको जामका कारण सर्वसाधरणहरु निकै आक्रोशित देखिन्थ्ये । मानिसहरु दैनिकी प्रभावित पार्नेगरी आन्दोलनले सर्वसाधरणलाई निकै आक्रोशित बनाएको छ ।
पहिचान र अधिकार माग्नेले कहिल्यै आफ्नो क्वालिटी चेक गरेका छन् ?
बाटोमा हिड्ने मानिसहरु आन्दोलनकर्मीलाई लखट्ने योजनाहरु बनाइरहेको सुनिन्थ्यो । संघीय गठबन्धनले जनताका यी आवाजहरुलाई ध्यान नदिइ यस्तै आन्दोलन जारि राखे जनताबाट लखटिने निश्चितै छ । जनतालाई अनावश्यक दुख दिने हो भने लखटिने सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा मोर्चाका नेताहरुले यसअघि पनि अनुभव गरिसकेका छन् ।
केहि महिनाअघि मात्रै पार्टीको कार्यक्रमका लागि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वीरेन्द्रनगरमा यु्वाहरुले लखटेका थिए । वीरेन्द्रनगरमा रहेको भ्याली भ्यू होटलमा खाना खान पुगेका उनलाई एक हुलले लखटेको थियो ।
युवाहरुको विरोधका कारण अवस्था तनावपूर्ण बनेपछि फोरम अध्यक्ष यादव पस्केको भारत समेत छाडेर कुलेलम ठोकेका थिए । यसभन्दा अघि पनि उपेन्द्र यादवलाई काठमाडौँको माइतीघरमा राजेन्द्र सापकोटाले लखटेका थिए । यादवलाई लखटेपछि सापकोटालाई धन्यवाद दिने कम थिएनन् ।
मधेसमा आन्दोलन चर्काईरहेको समयमा आन्दोलन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले माग पूरा नगरेसम्म राजधानी नफर्किने अडान लिएको मोर्चा आखिरमा आन्दोलन गर्न काठमाडौँमा आएको छ । मधेस आन्दोलनका नाममा देशमा अबौँ रकमको घाटा भयो भने ५० जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाए । सरकारले वार्ताको आग्रह गरेपनि मोर्चाले वार्तालाई प्राथमिकता दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा आन्दोलन नै गरिरहे र जनतालाई दुख दिइरहे जनताले फेरि नखेद्लान भन्न सकिन्न ।
कोरोना ग्राफ : २८ सय ५६ जना संक्रमित थपिए, काठमाडौं उपत्यकामा १५ सय ३५
क्या अचम्म ! ७६ सय टनको विशाल भवनलाई उचालेर सारियो (भिडियो)
प्रशासनको निर्देशन अवज्ञा गर्दै जनकपुरको राजदेवी मन्दिरमा झण्डै ९ हजार बोकाको बलि
महाभारतको उदाहरण दिँदै विष्णु रिजालले भने– नेकपाको चाल ‘खोइ के, खोइ के’
८ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता विष्णु रिजालले दुई अध्यक्षको कार्यशैलीले थप अन्यौलता उत्पन्न भएको बताएका छन्। पछिल्लो समय पार्टीभित्र देखिएको विवादलाई लिएर दुई अध्यक्षका छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति र निर्देशनले पार्टीको अवस्था पनि ‘खोइ के, खोइ के’ भन्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ।
नेकपा कर्णालीमा लफडा : दुई अध्यक्षका फरक–फरक पत्राचार, झन् बल्झियो विवाद
८ कात्तिक, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाकै सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सत्तारुढ दलभित्र सुरु भएको किचलो झन् बल्झिएको छ। प्रदेशमा भएको विवाद सुल्झाउन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र असन्तुष्ट सांसदहरुलाई काठमाडौं बोलाएका दुई अध्यक्षले नै पार्टीको प्रदेश कमिटीका नेताहरुलाई फरक–फरक निर्देशनसहितको पत्र पठाएपछि झनै अन्योल बढेको हो।
काबुलको शैक्षिक केन्द्रमा आत्मघाती बम विस्फोट, कम्तीमा १८ को मृत्यु
९ कात्तिक, काठमाडौं । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा रहेको एउटा शैक्षिक केन्द्रमा गराइएको आत्मघाती बम विस्फोटमा कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु भएको छ । शनिबार दिउँसो निजी रुपमा सञ्चालित शैक्षिक केन्द्रमा आत्मघाती बम विस्फोट गराइएको अफगानिस्तानको आन्तरिक मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त केन्द्रमा सयौँ विद्यार्थी पढ्ने गर्थे ।
रुस–चीन सैन्य गठबन्धन अमेरिकी सेनाभन्दा शक्तिशाली हुनेछ : पुटिन
८ कात्तिक, काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनले रुस र चीनबीचको सैन्य गठबन्धन अमेरिकी सेनाभन्दा शक्तिशाली हुने बताएका छन्। विश्वका दुई शक्तिशाली राष्ट्रबीचको गठबन्धनले आफूहरु मुख्य–मुख्य क्षेत्रमा अमेरिकी सेना र तिनका गठबन्धनभन्दा निकै शक्तिशाली हुने पुटिनको भनाइ छ।